Tony Todd သည်“ Candyman” Teaser သို့ပြန်ရောက်သည် - iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း Tony Todd သည် Candyman Teaser သို့ပြန်သွားသည်
Tony Todd သည် Candyman Teaser သို့ပြန်သွားသည်
by Trey Hilburn III ကို ဇြန္လ 29, 2020
ကရေးသား Trey Hilburn III ကို ဇြန္လ 29, 2020
အသစ်သောအဆုံးတွင်အအေးမိခြင်းကိုမခံပါနှင့် သကြားလုံး လူမိုက်တို့။ Nia DaCosta ၏ရုပ်ရှင်တွင်နောက်ဆုံးကြည့်ရှုမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သိုလှောင်ထားသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သဲလွန်စပေးသည်။ အလွန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်နောက်တွဲယာဉ်၏အဆုံးသည်တိုနီ Todd ၏အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးကြိုဆိုသည့်အသံဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ Tony Todd ကအခန်းကဏ္madeကနေပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ် Bernard နှင်းဆီ ဂန္ထဝင်။ ရာနှုန်းပြည့်ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်သည့်အတွက် Todd ၏ဂျော်ဒန် Peele ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်မှာ DaCosta ဖြစ်သည်။
အခုတော့တိုနီ Todd ရဲ့မျက်နှာပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုအဆုံးသတ်သွားပြီ။ ဒီရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမင်္ဂလာပါ။ ဒါပေမယ့်အခုတော့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။
Candyman အတွက်အနှစ်ချုပ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
“ Cabrini ၏နောက်ဆုံးတာဝါတိုင်များပြိုကျပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာယနေ့ခေတ်တွင်အန်တိုနီနှင့်သူ၏ရည်းစားသည်ယခုအခါ gabrified Cabrini ရှိခေါင်မိုးပေါ်သို့ပြောင်းရွေ့သွားသည်။ အဟောင်းကို -timer နှင့်အတူတစ် ဦး အခွင့်အလမ်းကြုံတွေ့ရအန်သိုနီ Candyman နောက်ကွယ်မှဖြစ်ရပ်မှန်ကိုမှဖော်ထုတ်။ ဒီဆိုးရွားလှသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားသူ၏စတူဒီယိုတွင်ပန်းချီကားများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြစ်အသုံးချရန်သူစိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောအတိတ်ကိုတံခါးဖွင့်လိုက်သည်။
ကောင်းပြီ, Candyman ပရိတ်သတ်တွေ? DaCosta ရဲ့ Clive Barker ရဲ့ပုံပြင်ကိုသင်ကြည့်ရတာဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသလဲ။ ထို့အပြင်၊ Tony Todd ပြန်လာခြင်းအပေါ်သင်မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားမိသနည်း။ မှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
Bernard နှင်းဆီသကြားလုံးယော်ဒန်မြစ် PeelNia DaCostaTony todd
လူတွေကိုမျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ဆင်ရန်အားပေးဖို့ဂျေဆင်သည်မန်ဟက်တန်သို့ပြန်သွားသည်
Check out: Netflix သို့လာမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်!
Epic 'Bat Out of Hell' တေးရေးဆရာ Jim Steinman ...
Cateories Browse Category ေရြးပါ အမေဇုံ (ရုပ်ရှင်) (7) အမေဇုံ (စီးရီး) (8) AppleTV + (1) Blu Rays (3) ဟာသကြောက်မက်ဖွယ် (46) ရုပ်ပြများ (11) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် (စီးရီး) (၁) စိတ်ကူးယဉ် (30) တွေ့ရှိထားသည့်ဗီဒီယိုများ (26) ဂေါ (23) HBO (ရုပ်ရှင်များ) (4) HBO (စီးရီး) (၅) ထိတ်လန့်စာအုပ်များ (42) ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း (10,380) ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင် (153) ထိတ်လန့်စီးရီး (46) ထိတ်လန့် Subgenres (8) ဟူးလူ (စီးရီး) (4) အင်တာဗျူးများ (ရုပ်ရှင်) (၂၅) အင်တာဗျူးများ (စီးရီး) (၁) LGBTQ ထိတ်လန့် (29) စာရင်း (ရုပ်ရှင်) (35) စာရင်း (စီးရီး) (၁) ဈေး (19) နဂါးထိတ်လန့် (9) ရုပ်ရှင်သုံးသပ်ချက်များ (37) ရုပ်ရှင် (11) ဂီတ (32) Netflix (ရုပ်ရှင်) (12) Netflix (စီးရီး) (20) စိတ်ကူးယဉ် (3) Paranormal (75) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသော (52) စီးရီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (5) Shudder (ရုပ်ရှင်) (၂၆) Shudder (စီးရီး) (၆) slasher (4) ထူးဆန်းပြီးပုံမှန်မဟုတ်သော (35) အစီအစဉ်များ (45) streaming များစီးရီး (15) ကစားစရာများ (2) နောက်တွဲယာဉ် (ရုပ်ရှင်) (114) နောက်တွဲယာဉ် (စီးရီး) (31) စစ်မှန်သောရာဇဝတ်မှု (41) ဗီဒီယိုဂိမ်းများ (163) \_ t ယူကျု (ရုပ်ရှင်) (၂) ယူကေ (စီးရီး) (၁၀)